U dhaqaaqista Waqtiga R&D ee Xirfadda Mihnadda | RayHaber | raillynews
HomeGUUDU dhaqaaqista Waqtiga R&D ee Xirfadda Mihnadda
21 / 05 / 2020 GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
R & D xagga aqoonta xirfadeed
Mahmut Özer, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada qaranka, ayaa u sheegay wargeys ku saabsan qorshayaashiisa ka dib cudurka daacuunka ee loogu talagalay xarumaha R&D ee lagu aasaasay dugsiyada sare ee xirfadda. Özer wuxuu yidhi, Waxaan haysan doonnaa ku dhawaad ​​20 R&D xarumood. Xarun walba waxay diirada saari doontaa aag kale. ”
Wareysiga Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarshada Qaranka waa sida soo socota: "Hadda waxaan u aadaynaa xilligii R&D-da xagga waxbarashada xirfadda" Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarshada Qaranka statedzer wuxuu caddeeyay in tani ay noqon doonto mid ka mid ah guulaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay 19-kii sano ee la soo saaray waxbarashada xirfadda, Waxaan ku dari doonaa kuwa cusub oo tixgelinaya qaybinta. Waxaan lahaan doonnaa ugu yaraan 20 R&D xarumood. Xarun walba waxay diirada saari doontaa aag kale. Tusaale ahaan, hal xarun ayaa wax ka qaban doonta oo keliya software-ka, halka mid kalena ay diiradda saari doonto teknolojiyadda qalabka biomedical-ka. Ahmiyaddeeda ugu weyni waxay noqon doontaa horumarinta wax soo saarka, patent, model utility, design iyo waxsoosaarka ganacsiga, diiwaangelinta iyo ganacsiga. Waxaan si joogto ah u kordhin doonaa tirada badeecada. Waxaan hadda ku tababari doonnaa macallimiinteena xarrumaha R&D goboleed. ” Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in manhajka waxbarashada mihnadku si dhakhso ah loo cusbooneysiin doono ka dib nidaamka farsamada, kombiyuutarrada, teknolojiyadda sirdoonka macmalka iyo xirfadaha dhijitaalka ah, Özer wuxuu carrabka ku adkeeyay in xarumaha R&D ay si weyn wax ugu biirin doonaan casriyeynta.
Wasaaradda Waxbarashada Qaranka (MoNE) ayaa bilowday weerar weyn maalmaha lagu dagaalamayay faafitaanka kovid-19. Tiro badan oo alaabo ah ayaa laga soo saaray alaabada jeermiska looga baahan yahay dugsiga ka hor, maaskaro, maaskaro laga ilaaliyo wajiga ilaa gambarka la tuurayo iyo isugeynta. Sidan, MEB waxay door muhiim ah ka qaadatay kahortaga cudurka faafa maalmaha ugu horreeya ee halganka. Kadib wuxuu sii waday soo saarista mashiinka maaskaroorka, aaladda filtariga hawada, aaladda laryngoscope aaladda qalabka neefsashada. Hawshan, oo muujineysa muhimadda waxbarashada xoogga xirfadeed ee adag, ayuu wasiir ku-xigeenka MoNE Mahmut Özer sharxay nooca qorsheynta waxbarashada xirfadda ay noqon laheyd ka dib marka uu ka dillaaco kovid-19.
'Saamayn xun ayaa na saamaysay'
Intii lagu jiray maalmihii dagaalladii Kovid-19, tababarka xirfadda waxay ku guuleysteen imtixaan guul leh. Maxaad u qorsheyneysaa mustaqbalka waxbarasho xirfadeed, oo sidoo kale leh khibrad aan caadi aheyn?
Waxbarshada mihnadaha waxay sameyneyaan ku biirin muhiim ah iyadoo lagu tababarayo agabyada aadanaha iyadoo la adeegsanayo xirfadaha xirfadeed ee looga baahan yahay suuqa shaqada sanado badan dalkeena. Waxbarashada mihnadeed waxay lahayd xilli niyadjab leh gaar ahaan ka dib coeff ku codsiga. Muddadan, waxbarashada xirfadda waxay joogsatay inay noqoto xulashada ardayda tacliinta ku guuleysatay. Sannadihii xigay, naxdin labaad ayaa laga helay adeegsiga meeleynta meelaynta dhammaan dugsiyada sare. Maxaa dhacay ka dib markii coeff-ka codsi uu bilaabay inuu ku celiyo, waxbarashadda xirfadda ayaa markale u rogay ikhtiyaar khasab ah ardayda aan ku guuleysan. Hawlahani waxay si xun u saameeyeen niyadda maamulayaasha iyo macalimiinta iskuuladayada xirfadaha. Waxbarashada mihnadaha ayaa caan ku ah dhibaatooyinka, maqnaanshaha ardayda, iyo dembiyada anshaxeed. Sidaas darteed, awood la'aanta qalin jebinta inay ka soo baxaan himilooyinkii suuqa shaqada ayaa xoojiyay aragtida taban ee xagga xirfadda. Sidaa darteed, waxaa luntay luminta kalsoonida naftiisa xagga waxbarashada xirfadda.
Is-aaminiddu si dhab ah dib uguma noqotid hawshan?
Sida saxda ah. Waxqabadka ugu muhiimsan ee hawshani waxay ahayd in dib loo helo isku kalsoonidii maalmihii hore ee xirfadaha waxbarasho xirfadeedka. Wuxuu tusay wuxuu sameyn karo markii dhibaatadiisa la xaliyo, la siiyay fursado iyo dhiirigelin. Hawshan, waxay ku timid ajandaha wax soo saarkiisa iyo awooddiisa wax soo saar, maahan dhibaatooyin waxbarasho xirfadeed. Sida ururada warbaahinta qaranka iyo kuwa caalamiga ahba ay u dhigayaan guulo dheeri ah, kalsoonida kalsoonida ayaa korodhay. Sida aaminaadda waxa ay sameyn karaan, soo saari karaan, iyo wixii ay soo saaraan uu qiimo leeyahay, guusha ayaa la timid.
'Xarun walba waxay diirada saari doontaa hal aag'
Xarumaha R&D miyay noqon doonaan kuwa joogto ah maalmaha ka dambeeya faafitaanka Kovid-19?
Waxbarashada xirfadda, hadda waxaan maraynaa xilligii R&D. Tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah guulihii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay Kovid-19 dib-u-dhigista waxbarashada xirfadda. Hawshan, waxaan ku dari doonaa kuwa cusub xarumaha R&D ee aan aasaasnay, iyadoo la tixgalinayo qeybinta gobolka. Daraasadahaan ayaa soo gabagabeynaya. Waxaan lahaan doonnaa ugu yaraan 20 R&D xarumood. Xarun walba waxay diirada saari doontaa aag kale. Tusaale ahaan, hal xarun ayaa wax ka qaban doonta oo keliya software-ka, halka mid kalena ay diiradda saari doonto teknolojiyadda qalabka biomedical-ka. Xarumaha waxay noqon doonaan isgaarsiin joogta ah oo midba midka kale iska kaashan doono oo midba midka kale kaalmayn doono. Xarumahani waxay sidoo kale noqon doonaan xarumo heer sare ah. Ahmiyaddeeda ugu weyni waxay noqon doontaa horumarinta wax soo saarka, patent, model utility, design iyo waxsoosaarka ganacsiga, diiwaangelinta iyo ganacsiga. Waxaan si joogto ah u kordhin doonaa tirada badeecada. Waxaan hadda ku tababaraynaa macallimiinteena macallimiinta xarumahaan R&D-ka goboleed. Xarumahan waxay kaloo gacan weyn ka geysan doonaan casriyeynta manhajka waxbarasho ee xirfadda.
Kalsoonidoodii ayaa kordhay
Ma dhihi karnaa in maalgashiga ay MEB ku sameysay waxbarashada xirfadda labadii sano ee la soo dhaafay ayaa midho dhaley?
Haa. Wasaarad ahaan, runtii waxaan diiradda saarnay waxbarashada xirfadda. Waxaan gaarnay mashaariic aad u muhiim ah midba midka kale ka dib. Tan ugu muhiimsan, markii ugu horreysay, waxaan sameynay iskaashi qotodheer oo dhameystiran oo aan la leennahay wakiilo xoog leh oo ka kala socda waaxaha dhammaan qaybaha waxbarashada. Sidaa daraadeed, kalsoonida waaxaha waxbarashada xirfadaha ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay. Dhamaan talaabooyinkan ayaa suurta geliyey jawaab deg deg ah, wadareed iyo firfircoon in lagu soo saaro hawshan.
Sideed u qorsheyn doontaa hadda wixii ka dambeeya?
Waxaan sii wadaynaa inaan sii xoojinno wareegga-soo-saarista-shaqo-helista ee waxbarashada xirfadda. Waxaan si joogto ah u cusbooneysiin doonnaa tababarka annaga oo wadashaqayn xoog leh la yeelan doonna suuqa shaqada. Waxaan ka dhigi doonnaa iskuuladeena sare xirfadeed xarumo wax soo saar. Waxaan si joogto ah u kordhin doonnaa awoodda waxsoosaarka ee alaabada iyo adeegyada, gaar ahaan inta ay gaarsiisan tahay lacagaha dib loogu soo nooleeyo. Tusaale ahaan, sanadka 2019, waxaan sare u qaadnay dakhliga kasoo gala waxsoosaarka baaxadan 40 boqolkiiba ilaa 400 milyan TL. Sanadka 2021, bartilmaameedkayagu waa 1 bilyan oo TL wax soo saar ah. Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in la wanaajiyo awooda shaqaalaynta iyo xaaladaha shaqo ee ardayda ka qalin jabisay suuqa shaqada. Wadashaqeynta aan la sameynay waaxaha leh mudnaanta shaqada ayaa ahaa talaabooyinkeena koowaad ee tan. Tallaabooyinkani waxay sii wadayaan inay sii xoogeystaan.
'Dhammaan badeecadihii aan diiradda ku saarnay waa la soo saaray'
Waxaad ka sameysay xarumo R&D iskuulada sare ee xirfadaha. Maxay ahayd ujeedadu?
Tabarucaadda tababbarka xirfadeed ee maalmihii la dagaallanka Kovid-19 waxay ahayd laba laab. Marxaladda koowaad ayaa ku lug lahayd soosaarid ballaaran iyo gaarsiinta maaskaro loo baahan yahay, jeermis-dileyaal, wejiga ilaalinta wejiga, tufaaxa la tuuro iyo buufiska. Marxaladani waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo wax soo saarida macnaha guud ayaa wali socda. Wejiga labaad wuxuu diiradda saaray dejinta iyo soo saarista aaladaha ay ka mid yihiin kuwa wax lagu keydiyo iyo mashiinnada maaskaro ee loo baahan yahay in lagula dagaallamo kovid-19. Si loogu guuleysto marxaladda labaad, waxaan aasaasnay ​​xarumo R&D ah oo ku dhex yaal iskuuladeena xirfadaha iyo farsamada ee Anatolian-ka ee gobolladayaga leh kaabayaal xoog leh. Waxaan ku xoojinay kaabayaasha xarumaheena R&D ee qaabeynta iyo soosaarka alaabadaasi. Daraasado deg deg ah ayaa laga sameeyay xarumahaan aan ka aasaasnay ​​magaalooyinkeena sida Istanbul, Bursa, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Muğla iyo Xatay. Xarumahan, waxaan awoodnay inaan soo saarno dhammaan alaabada aan diiradda saarnay. Macnaha guud, alaabooyin badan ayaa loo habeeyay oo la soo saaray sida mashiinka maaskaro qalliinka, qalabka neefsashada, mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka caadiga ah, qalabka loo yaqaan 'laryngoscope', sariirta daryeelka degdega ah, aaladda duubista hawada, qeybta sampling.
Markaad tixgaliso casriyeynta manhajka, ma sameyn doontaa cusbooneysiin cusub, adiga oo tixgelinaya in suuqa shaqadu uu dhammaan doono ka dib dillaaca Kovid-19?
Dabcan. Hawlgalkan ka dib waxaa jiri doona cusbooneysiin manhaj oo deg deg ah oo loogu talagalay xirfadaha dijitaalka ah. Uma tixgelinno machadyada xirfadaha iyo farsamada inay yihiin machadyo halka kaliya lagu bixiyo waxbarasho xirfadeed. Waxaan dooneynaa in ardaydeena oo dhami ay bartaan xirfadaha muhiimka ah si ay ula jaan qaadaan isbeddelada xaaladaha teknolojiga iyo bulshada. Waxaan rabnaa inaan yareyno farqiga u dhexeeya mihnadaha iyo waxbarashada guud muddo kadib. Sidaa daraadeed, waxaan iskaashi la sameyneynaa labadaba farsamo ahaan iyo waxbarasho ahaan ururo adag sida ITU iyo ASELSAN. Xirfadaha loo baahan yahay iyadoo loo eegayo heerka tikniyoolajiyada ee garoonka shaqada waxaa lagu dari doonaa manhajka dhammaan xirfadaha aan barayno. Si kastaba ha noqotee, ku qanci mayno tan, laakiin waxaan ka shaqeyn doonnaa inaan xoojino xirfadaha guud ee qalin-jabiyadeena.
Mahmutbey ayaa ku jira nidaamka marxaladda lacag la'aanta ah
Amarka taraafikada cusub ee Halkapınar
Marxaladaha ugu dambeeyay waxay ku dhaafaan munaasabaddan
Gaadiidka RAILWAY gaadiidka waa la furayaa
teknoolojiyadda qalabka biomedical
aaladda nadiifinta hawada
Dugsiyada sare ee xirfadda
Xarumaha R&D ee dugsiyada sare ee xirfadda
Mashiinka maaskaro ee N95
qalabka laryngoscope fiidiyowga
tikniyoolajiyadda sirdoonka ee macmalka ah
Sariirta Daryeelka Degdegga ah
Satso Maalinta Dardarinta iyo Xirfadaha Shaqada
Leonardo da Vinci Gudbinta Cusub ee Mashruuca Waxbarashada Xirfadaha